Wednesday October 03, 2018 - 08:22:18 in Wararka by Super Admin
Kadib shan maalmood oo dagaallo xooggan iyo qaraxyo ay lakulmayeen ayay ugu dambeyn ciidamada Xabashida Itoobiya gaareen deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan Bartamaha Soomaaliya.
Wuxuu ahaa safar dhidid iyo dhiig badan uga daatay Kumanaan Askari Itoobiyaan iyo Jabuutiyaan ah, ciidamadan huwanta ah ayaa Jimcihii lasoo dhaafay ka dhaqaaqay magaalada Beled Weyne waxayna ujiheysteen dhanka deegaanka Halgan oo xarunnta gobolka ujira wax aan ka badneyn 50 Km.
Wararka ka imaanaya Hiiraan ayaa xaqiijinaya in ciidamada Itoobiya ay gaareen halkii ay u socdeen oo ah deegaanka Hiiraan iyagoo wata Meydad iyo dhaawacyo kadib 5 maalmood oo dagaallo xiriir ah kala kulmayeen xoogaga Shabaabul Mujaahidiin.
intii ay ku safrayeen wadada laamiga ah waxay lakulmeen illaa 11 weerar Dhabbagal ah iyo 3 qarax oo lala eegtay gaadiidka ciidamada Xambaara ee Uuraallada loo yaqaan, ilo wareedyo ayaa sheegaya in markii ciidamadu gaareen Halgan ay garoonka macmalka deegaanka ay soo caga dhigatay diyaarad ay ku buufsantahay calaamadda UN-ka waxayna halkaas ka daabushay Meydad iyo dhaawacyo.
Weerarada ugu khasaaraha badan ayaa ciidamada huwanta ah ku qabsaday deegaannada Nuur Fanax,Garasyaani iyo Burdaar halkaas oo xoogaga Al Shabaab dagaal jabhadeyn ah marwalba kula galaan ciidamada Xabashida Itoobiya marka ay dhaq dhaqaaq ka sameynayaan gobolka Hiiraan.
Intaas oo dhiigbax ah ayay ciidamada Itoobiya uhurayaan haliya in ay sahay ugudbiyaan ciidamada uga go'doonsan deegaanka Halgan, khubarrada melleteri ayaa rumeysan in ciidan sidaan utaak daran uusan waxba utarayn dowladda Federaalka sababtoo ah wuxuu dagaalka ugu adag u bixiyaa sidii uu biyo iyo baad u heli lahaa.